बलिउड अभिनेत्रीको ट्याटुको शौख, कुन अभिनेत्रीको कस्तो ट्याटु ! हेर्नुहोस् - Experience Best News from Nepal
बलिउड अभिनेत्रीको ट्याटुको शौख, कुन अभिनेत्रीको कस्तो ट्याटु ! हेर्नुहोस्
बलिउडमा ट्याटु बनाउने प्रचलन निकै प्रचलित छ। दीपिका पादुकोण हुन् चाहे प्रियंका चोपडा चाहे आलिया भट्ट। बलिउडका थुप्रै चर्चित नायिकाहरूले आफ्नो शरीरका विभिन्न अंगमा ट्यायु बनाएका छन्। कति नायिकाले फिल्मका लागि ट्याटु बनाएका हुन् भने कतिले आफ्नो ब्वाइफ्रेन्‍डको नाममा ट्याटु खोपेका छन्।
बलिउडकी किङ् कंगना रनौत अलग अन्दाजाको लागि माहिर मानिन्छन्। जुन कुरा उनको ट्याटुमा पनि देख्न सकिन्छ। कंगनाले दुई ट्याटु बनाएकी छन्। उनको पहिलो ट्याटु गर्दनमा छ। जुन ‘sword with wings ट्याटु बनाएकी छन्। यस्तै अर्को ट्याटु ‘warrior angel’ मा खोपिएको छ।
दीपिका पादुकोणले आफ्नो गर्दनमा ब्वाइफ्रेन्ड रणबीर कपुरको नाममा ट्याटु खोपेकी छन्। उनले’RK’लेखिएको ट्याटु खोपेकी हुन्। तर, २०१० मा रणबीरसँग ब्रेकअप भएपछि उनले यो ट्याटुको डिजाइन दोस्रोपटक गराएकी थिइन्। यसका अलावा उनले अर्को ट्याटु पाउँमासमेत कोरेकी छन्।
सुष्मिता सेनले हातमा Aut viam inveniam aut faciam लेखेकी छन्। यसका अलावा उनले अन्य तीन ट्याटु समेत बनाएकी छन्।
इशा देओलले आफ्नो पिठ्युमा ट्याटु खोपेकी छन्। जसमा उनले गायत्री मन्त्र कोरेकी छन्।
राखी सावंत विवादको अर्को नाम हो। प्राय उनी कुनै न कुनै विवादमा मुछिएकै हुन्छिन्। उनले आफ्नो शरीरका विभिन्न ठाउँमा ट्याटु खोपेकी छन्।
आलिया भट्ट बलिउडकी चर्चित नायिका मात्र होइनन्। उत्कृष्ठ अभिनयका कारण उनी थुप्रैको दिलमा बस्नसमेत सफल भएकी छन्। जसरी आलियाले थुप्रैको दिलमा राज गरेकी छन् त्यसरी नै उनले खोपेको ट्याटु पनि सानदार छ। उनले गर्दनमा ‘पटाका’ लेखेको ट्याटु कोरेकी छन्।
प्रियंका चोपडा आफ्ना पितालाई औधी माया गर्छन्। त्यसैले उनले ‘डैडिज लिल गर्ल’ लेखिएको ट्याटु हातमा खोपेकी छन्।
प्रियंका र निकका यी ४ तस्बिर जुन यो सालभर नै चर्चामा रहयो !!
‘विन्टर गाला’मा १३ लाखको गाउनमा देखिईन् नव दुलन प्रियंका
‘भारत’ को आक्रामक ब्यापारले प्रियंकालाई लाग्यो झड्का !! आखिर किन ?
Alia BhattDeepika PadukonePriyanka Chopra